पार्टीभित्रको घेराबन्दीलाई विफल पार्न ओलीको अर्को अस्त्र::Point Nepal
पार्टीभित्रको घेराबन्दीलाई विफल पार्न ओलीको अर्को अस्त्र
काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक डा´के । बैठकको ए`जेन्डा गणतन्त्रवि´रोधी र हिं´सात्मक गतिविधि गर्नेवि´रुद्ध एक´जुट हुने थियो । उनले त्यही अनुसार ब्रि´फिङ गरे । ओलीले स´वंदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई बोलाएर सुझाव मागे ।
बैठकमा अन्य दलका प्रतिनिधिले बोलेपनि आफ्नै दल नेकपाका प्रतिनिधिलाई ओलीले बोल्ने अवसर दिएनन् । उनीहरुले सुनेर मात्र बसे । ओलीले अहिलेको अवस्थामा किन सर्वदलीय बैठक डा´के ? के साँच्चै राजावादीले गणतन्त्रलाई ठुलो चु´नौती दिइसकेका छन् ? यो विषयबारे विश्लेषण हुनथालेको छ ।
कतिपयले ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर पार्टीभित्रबाट चलेको प्रहारबाट ध्यान अन्यत्र मो´ड्न खोजेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । उनले राजावादीको शक्ति बढेको देखाएर आफ्नै वि´रोधीलाई समेत त´र्साउन खोजेको चर्चा छ । विशेषगरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई उनले डर देखाउन थालेका छन् । यसैलाई कारण देखाउँदै गणतन्त्रवा´दी शक्तिलाई एकजुट हुन आ´ग्रह समेत गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा जा´नलाग्दा उसलाई पनि रोक्ने ओलीको प्रयास छ । सडकमा राजावादी बढेबाट ओलीले काँग्रेसलाई पनि मिलेर जान आग्रह गरेका छन् । उनले हिजोको बैठकमा क´डा आलोचनालाई सुन्ने धै´र्यता पनि राखेका थिए । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
ओलीले वि´गतमा पनि सत्ता सं´कट आउँदा अनेनक राजनीतिक अस्त्र फालेका थिए । उनले कहिले उधारो आश्वासनहरु दिएर पार्टीभित्रको घेराबन्दी तो´ड्न सकेका थिए । यसपटक त्यसमा सफल बन्न सकेका छैनन् । उनले वि´कल्पमा अन्य रा´जनीतिक दलसँग समन्वय र सहकार्यलाई बढाउन थालेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता समिकरणबारे छलफल गरिसेका छन् । ओलीले यसरी पार्टीभित्र भएको प्रहारलाई असफल बनाउन राजनीतिक अस्त्रहरु नयाँ तरिकाले फालिरहेका छन् ।